%% खुलापन निर्माणकर्ता र आपूर्तिकर्ता - चीन%% खुल्ला कारखाना
सरासर लालित्य सूर्य छाया सनस्क्रीन जाल पर्दा अंधा पीवीसी कपडा
सनस्क्रीन फेब्रिक एक कार्यात्मक सहायक सनशाड कपडा हो जसले सूर्यको किरण र सूर्यको रोकावटलाई रोक्दछ। यो सामान्यतया कडा प्रकाशको साथ सम्पर्कबाट बच्न आइटमहरू कभर गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ र यसले कडा प्रकाश र अल्ट्राभायोलेट किरणहरू र अन्य पक्षहरूलाई रोक्नको प्रभाव गर्दछ।
सामान्यतया, सामान्य जाल स्क्रिन फेब्रिक ब्ल्याकआउट रेट 85 85% -99%% सम्म पुग्छ, खुलापन १% -१%% भन्दा फरक हुन्छ, ज्वाला retardant प्रकार्य स्थायी ज्वाला retardant प्रभावको साथ उपलब्ध छ।
अध्ययन घाम फिल्टरिंग वाणिज्यिक सनस्क्रीन रोलर ब्लाइन्ड विन्डो शेडहरू
अध्ययनका लागि रोलर ब्लाइन्डहरू छनौट गर्नुहोस्
१. इनडोर आइटमको साथ रंग मिलाउन आवश्यक छ।
पट्टि छनौट गर्दा, अध्ययनमा अन्य फर्निचरको रंगमा ध्यान दिन उत्तम हुन्छ, विशेष गरी बुककेसको रंग। आधुनिक फर्निचर समग्र समन्वयको लागि बढी महत्त्वपूर्ण छ। अन्धाको रंग छनौट गर्दा, यदि हामी फर्निचरको रंगलाई हेर्छौं। फर्निचरको रंगसँग मेल खान्नुहोस्, अध्ययन अझ राम्रोसँग निर्माण गर्न सकिन्छ।
चीन ब्लाइन्ड्स फैक्ट्री सरासर लालित्य सनस्क्रीन ब्लाइन्ड्स बाट सनस्क्रीन कपडा निर्माण
ब्लाइन्ड्स स्क्रीन र color मिलान
घरको सजावटमा हामी घरको सजावट गर्न रंगलाई ध्यान दिन्छौं। सबै भन्दा पछि, र theमा त्यहाँ कुनै ठूलो गल्ती छैन, तर यो ज्यादै धेरै छ, र यो अपरिहार्य छ कि यो थोरै बोरिंग छ! र र home्ग घर सजावटले मात्र घरलाई रंगीन बनाउन सक्दछ, तर विभिन्न रंगहरू भएका मानिसहरूलाई फरक मुड पनि दिन्छ। त्यसोभए रंगीन घर कसरी सजाउने? कृपया एक समूह हेर्न समूहलाई फलो गर्नुहोस्!
आउटडोर म्यानुअल विन्डो शटर आधा शेड डुअल लेयर इलेक्ट्रिक डबल रोलर ब्लाइन्डहरू
ग्रुप ग्रुप सनस्क्रीन जेब्रा कपडाको अनुप्रयोग
१. सार्वजनिक भवनहरू (व्यायामशाला, भव्य थियेटर, एयरपोर्ट टर्मिनल, प्रदर्शनी केन्द्र)
फेब्रिक्सले सामान्यतया B1 स्तर (अक्सिजन अनुक्रमणिका ≥२२) आगो र ज्वाला retardant मानक पूरा गर्न आवश्यक छ
२. कार्यालय भवन (कार्यालय, बैठक कोठा, लबी)
पूर्व र पश्चिम सामना गर्दै सामान्यतया १% -3% खुलापनका साथ कपडा छनौट गर्नुहोस्; उत्तरको सामना गर्दै सामान्यतया १०% खुलापनका साथ कपडा छनौट गर्नुहोस्; दक्षिण सामना गर्दै सामान्यतया%% खुलापनका साथ कपडा छनौट गर्नुहोस्।
चीन होम सजावट सौर छायाँ विन्डो सनस्क्रीन रोलर ब्लाइन्ड कपडा थोक चीनमा
रोलर ब्लाइन्ड कपडा
जीवन स्तरको सुधारको साथ, सौर्य छायाँ विन्डो कपडाहरूको लागि व्यक्तिहरूको उच्च र उच्च आवश्यकताहरू हुन्छन्। उपभोक्ताहरूले अब चीनको सनस्क्रीन रोलर अन्धा कपडा थोकको थोकको उपस्थिति गुणस्तरमा मात्र ध्यान दिदैनन्, तर घर सजावट कपडाको सुरक्षा र वातावरणीय संरक्षणमा पनि बढी ध्यान दिन्छन्। त्यसकारण, छायाको कपडाको बहु-कार्यात्मक गुणहरू अधिक स्पष्ट हुँदै गइरहेका छन्।
गर्मी इन्सुलेशन र ऊर्जा बचत
सेडि fabrics्ग कपडाहरूसँग राम्रो थर्मल इन्सुलेशन विशेषता हुन्छ जुन अन्य कपडाहरूसँग हुँदैन, जसले सौर्य विकिरणले उत्पन्न गर्मीलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न सक्दछ, इनडोर एयर कन्डिशनरको प्रयोग दरलाई घटाउँछ, जसले सौर्य विकिरणको% 86% लाई हटाउँछ र भित्री हवालाई चिल्लो राख्न सक्छ। र आरामसँग विन्डो बाहिर सुन्दर दृश्य को मजा लिन सक्छन्।
थोक चीन आपूर्तिकर्ताहरु अफिस विन्डो पर्दा मोटर चालित रोलर अंधा छायाहरु
इलेक्ट्रिक रोलर ब्लाइन्डहरूको कार्यहरू
1. ऊर्जा बचत र वातावरण संरक्षण
रोलर शटर ढोका र विन्डोजसँग सुन्दर र उपन्यास आकार, कॉम्प्याक्ट र उन्नत संरचना, सजिलो अपरेसन, असहायपन, कडा कठोरता, राम्रो सीलिंग, जमिन क्षेत्रको कब्जा नहुने, लचिलो र सुविधाजनक खोल्ने र बन्द गर्ने, आदि) का सुविधाहरू छन्, जुन प्रभावकारी ढ achieved्गले प्राप्त गरिएको छ। यो केन्द्रीय उर्जा बचत र वातावरणीय संरक्षण नीति को प्रतिक्रिया मा।
२ चिसो संरक्षण
इलेक्ट्रिक रोलर ब्लाइन्डहरूसँग धेरै राम्रो छाप लगाउने प्रदर्शन छ, चिसो संरक्षणको प्रभाव अधिकतम गर्न सक्छ, र तपाईंको घर प्रयोगको लागि धेरै उपयुक्त छ।
चीन विन्डोज सन शेड पॉलिएस्टर रोलिंग मोटर ब्लाइन्ड कपडा
इलेक्ट्रिक रोलर शटरहरूमा प्रयोग गरिएको विशेष सामग्रीले यसलाई सबै प्रकारका कठोर अवस्थाहरूमा खडा गर्दछ, जुन घर प्रयोगको लागि अन्य साधारण पर्दा द्वारा नमिल्दो छ।
विद्युतीय शटर विन्डो संरचना टिकाऊ, कडा र कठोर छ, जसले साधारण चोरहरूलाई स्पर्श गर्नबाट रोक्न सक्छ र सबै दिशामा तपाईंको जीवन र सम्पत्तीलाई बचाउन सक्छ।
शटर विन्डो सनस्क्रीन पैटर्नयुक्त वसन्त रोलर ब्लाइन्ड कपडाहरू
घर पूरा गर्न विन्डप्रुफ ब्लाइन्डहरू।
समाजको विकासको साथ, अधिक र अधिक उपभोक्ताहरू प्रकाश अवस्थाहरू र बाहिरी परिदृश्यको खोजी गर्दैछन्। यद्यपि शीशा भवनहरूको चम्किलो दृश्य अन्तर्गत त्यहाँ धेरै समस्याहरू छन्: ग्रीनहाउस प्रभाव, उच्च उर्जा उपभोग, सौर विकिरण पर्यावरण संरक्षण, हरियो, सुरक्षा र अन्य पक्षहरूको जनताको खोजीको साथ, विन्डप्रूफ रोलर शटर गृह जीवनमा प्रवेश गरेको छ। त्यसो भए विन्डप्रूफ रोलर ब्लाइन्डका फाइदाहरू के हुन्?
1. सन प्रुफ प्रदर्शन
वाइन्डप्रूफ रोलर शटरले प्रायः सूर्यको प्रकाश प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ र कोठामा पनी सूर्यको प्रकाश समायोजित गर्न सक्छ। मूलतः यसको प्रयोगले ठाउँ ओगट्न सक्दैन।
विन्डो रोलर आउटडोर सनशाडेस विनाइल सनस्क्रीन ब्लाइन्ड्स कपडा
चीन रोलर ब्लाइन्डहरू
वर्तमानमा बजारमा विभिन्न स्मार्ट सनशेड उत्पादनहरू छन्। उपभोक्ताहरूको लागि, कसरी धेरै उत्पादनहरूबाट राम्रो उत्पादनहरू किन्न? सामान्यतया, यसलाई निम्न बिन्दुहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ।
(१) ब्रान्ड: उच्च ब्रान्ड सचेतताका साथ उत्पादनहरू छनौट गर्नुहोस्, र गुणस्तर र बिक्री सेवाहरूको ग्यारेन्टी हुनुपर्दछ;
(२) प्रकार्य: उत्पादनहरू खरीद गर्दा, उपभोक्ताहरूले केवल उत्तम कारीगरीको साथ उत्पादनहरू छनौट गर्नुपर्दैन, तर उनीहरूको कार्यक्षमतामा पनि ध्यान दिनुहोस्;